Washing Machine NA-FD14V1 - Panasonic
14kg NA-FD14V1 အထူး အစွန်းအထင်း ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းအတွက် အပေါ်မှ အဝတ်ထည့်ရသည့် အဝတ်လျှော်စက်
သင့်ကလေးများ သဘောကျသည့်အရာကို ကာကွယ်ရင်း သင် မလိုချင်သော အရာများကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
Care+ Stain Expert သည် လျှော်ဖွပ်ရသည့် အဝတ်အမြောက်အများရှိသော လူများသည့် မိသားစုများအတွက်ပင် အဝတ်အစားများမှ အစွန်းအထင်းမှန်သမျှ အားလုံးကို တစ်နေရာမကျန် နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ဖယ်ရှားပေးသည်။
ရေအားပြင်းပြင်း ရိုက်ခတ်မှုဖြင့် အစွန်းအထင်းများ လွင့်ပြယ်စေနိုင်စွမ်း
လျှော်ဖွပ်မှု စွမ်းဆောင်ရည် 14%* အထိ ပိုမိုကောင်းမွန်သဖြင့် သင့်ကလေးများကပေးသော ချွတ်ရခက်သည့် အစွန်းအထင်းများကို တိုက်ချွတ်လျှော်ဖွပ်ရသည်မှာ စိတ်မသက်သာစရာ မဟုတ်တော့ပါ။ TD Inverter က အားဖြည့်ပေးသော Water Bazooka ဖြင့် ချွတ်ရခက်သည့် အစွန်းအထင်းများကို အလွယ်တကူ ချွတ်နိုင်ပြီး သင့်ကလေး နောက်တစ်ခါ အပြင်ထွက်သွားလာပါက အစွန်းအထင်းများ ထပ်မံကင်းစင်စေသည်။
* Panasonic NA-F160A6 တွင် အဝတ်အပြည့်ထည့်၍ လျှော်ဖွပ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည် (ရုံးတွင်း စစ်ဆေးခြင်း)
အကောင်းဆုံး သန့်စင်၍ ရောဂါပိုးကင်းကင်း လျှော်ဖွပ်နိုင်စွမ်း
Water Bazooka ၏ အားကောင်းသော ရေလည်အားသည် အဝတ်အထည်များထဲ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ထိုးဖောက်နိုင်ပြီး အစွန်းအထင်းများနှင့် လက်ကျန်ချေးချွတ်ဆေးများကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးသည်။ အဝတ်များအား လျှော်ဖွပ်သန့်စင်နေစဉ် ယင်းက အဝတ်အထည်များကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် သန့်ရှင်းတောက်ပြောက်စေသည်။
လည်ပတ်မှု တစ်ခုစီတိုင်းအတွက် လိုအပ်သော ပါဝါကို ကောင်းစွာပေးခြင်းဖြင့် Panasonic TD Inverter သည် ပိုမိုပြောင်စင်စွာ လျှော်ဖွပ်ဆေးကြောနိုင်ရန် ပါဝါ6ဆ ပိုမိုထုတ်ပေးနိုင်ပြီး စွမ်းအင်လည်း လျှောက်သုံးသည် - * စွမ်းအင် 40% အထိ သက်သာစေသည်။
* Panasonic NA-F160A6 တွင် အဝတ်အပြည့်ထည့်၍ လျှော်ဖွပ်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ထားသည် (ရုံးတွင်း စစ်ဆေးခြင်း)။
သင်၏ လျှော်ဖွပ်ရန် လိုအပ်ချက်များအတွက် အကျိုးရှိရှိ ချွေတာသုံးစွဲပေးမည့် စွမ်းအင်
အရှိန်နှုန်းခြောက်ခုပါ လည်အားပို့လွှတ် ဂီယာအသစ်များဖြင့် TD Inverter သည် လည်ပတ်သည့် အပတ်ရေတစ်ကြိမ်စီတိုင်းအတွက် အကောင်းဆုံး လည်နှုန်း သို့မဟုတ် စွမ်းအင်မျိုးစုံကို ပံ့ပိုးပေးသည်။
1. အဝတ်အထည်သန့်ရှင်းသော ရလဒ် - ပိုမိုအားကောင်းသော ရေစီးအား
2. ပိုမိုစွမ်းအင်ချွေတာပေးနိုင် - စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်း
3. အဝတ်အထည်များ ငြိ၍ ရှုပ်ထွေးမှု သိပ်မရှိခြင်း - လည်နှုန်းနိမ့်
4. အဝတ်စည်ပိုင်း သန့်ရှင်းရေး - အဝတ်စည်ပိုင်း အော်တိုသန့်ရှင်းရေး
အစွန်းအထင်းမျိုးစုံ ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းနှင့် ဘက်တီးရီးယားများကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပေးခြင်း
ဘယ်လိုမျိုး အစွန်းအထင်းပဲဖြစ်ပါစေ ဘယ်လိုနေရာမျိုးက ပေလာပါစေ အစွန်းအထင်းချွတ်ရန် ကြိုတင်ဂရုစိုက် ဆောင်ရွက်ရမှုနှင့် လက်ဖြင့်လျှော်ဖွပ်ရသည့် အချိန်ကို အလွယ်တကူ ချွေတာလိုက်ပါ။ StainMaster+ သည် အကောင်းဆုံး ရေအပူချိန်တွင် တိုက်ချွတ်လျှော်ဖွပ်ပေးနိုင်စွမ်းဖြင့် အဝတ်အထည်များပေါ်ရှိ အစွန်းအထင်းမျိုးစုံကို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားပေးပြီး မမြင်နိုင်သော ဘက်တီးရီးယားများကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပေးသည်။
* ဂျပန် အစားအသောက် သုတေသန ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးထားသည် / ဖြန့်ဖြူးမှု အမှတ်- 16033827001-0201,16033827001-0401
ရေလည်အား ကောင်းကောင်းဖြင့် ကောင်းစွာ ပွတ်တိုက်လျှော်ဖွပ်ခြင်း
TD Inverter၊ အတောင် 8 ဖက်ပါဒီဇိုင်းဖြင့် Active Wave Pulsator တို့ကို အသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် အဝတ်လျှော်ရာတွင် အရှိန်ပြင်းပြင်း ဒေါင်လိုက် ရေစီးအားက တိုက်ချွတ်ပေးသည့် ရလဒ်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ အဝတ်များကို တိုက်ချွတ်ရွေ့လျားမှုဖြင့် ထပ်ခါထပ်ခါ လှုပ်ရှားပေးသောကြောင့် ချွတ်ရခက်သော အစွန်းအထင်းများကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးသည်။
အဝတ်များ တစ်ပုံတစ်ပင် လျှော်နေရသည့်တိုင် အိမ်အလုပ်ပေါ့သွားသကဲ့သို့ ခံစားရနိုင်ပြီး လျှော်ဖွပ်မှုတိုင်းတွင် အားမစိုက်ရသလောက် ဖြစ်စေပါသည်။
Panasonic Top Load အဝတ်လျှော်စက်ကို အဝကျယ်တစ်ခုဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသဖြင့် သင့်မိသားစု၏ လျှော်စရာအဝတ်ပုံကို အသွင်း/အထုတ် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
အလွယ်တကူဖွင့်၍ နေ့စဉ် အားမစိုက်ရဘဲ လျှော်ဖွပ်နိုင်စွမ်း
အဝတ်ထည့်ရ / ထုတ်ရလွယ်ကူသည်
ပိုကျယ်သော အဝတ်စည်ပိုင်း အပေါက် အဝကျယ်သော အပေါက်က ကြီးမားသော အထည်များကိုပင် အသွင်း/အထုတ် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်စေသည်။
အလွယ်တကူ လက်လှမ်းမီ ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း
အောက်နိမ့် အရှေ့ပိုင်းအမြင့် သင့်အနေဖြင့် အရပ်မရှည်သည့်တိုင် စည်ပိုင်းအောက်ခြေအထိ လက်လှမ်းပြီး လျှော်ဖွပ်ထားသော အဝတ်အစားများကို အလွယ်တကူ ထုတ်ယူနိုင်သည်။
ထိန်းချုပ်အကန့်သည် အနောက်ဘက်တွင်ရှိသဖြင့် အောက်သို့ငုံ့မကြည့်ဘဲ ခလုတ်များကို အလွယ်တကူ ဖတ်နိုင်ပြီး ဖွင့်နိုင်သည်။
ဘောင်မဲ့ မှန်ပြားအဖုံးပါရှိသည့် ရိုးရှင်းသော ထိန်းချုပ်အကန့် ဒီဇိုင်းကြောင့် သစ်ဆန်းခေတ်မီသည့်ပုံစံ ပေါက်ပါသည်။
StainMaster+ eliminates multi-stain and bacteria with hot wash
ECONAVI saves water and energy with advanced sensor technology